How'd it happen and more reports?: စိတ် ခိုင် မှ ဖတ် ပါ
The Economist Magazine ကြီးမှ ၂၀၁၅ Edition အဖြစ် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းစည်း အသီးသီး နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို စုစည်းပြီး စာရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ မြန်မာနိူင်ငံနှင့် ပါတ်သက်သော စာရင်း ဇယားများကို ထုတ်နှုတ်၍ တင်ပြထားပါသည်။ ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၇၄) ခုမှ ၂၀၁၂-၁၃-၁၄ ခုနှစ်တွင် ရရှိသော အချက်အလက်များကို မူတည်၍ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်၊
ကျွန်တော် သေသေချာချာ မှာတယ်နော်….
မြန်မာနိူင်ငံသည် ဒုက္ခသည် အရေအတွက် ၄၁၅, ၄၀၀ ရှိပြီး သတ္တမမြောက် ဒုက္ခသည် အရေအတွက် အများဆုံး ထုတ်လုပ်သော နိူင်ငံအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ပြသာနာ ဖြစ်ပွားနေသော အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဆိုမာလီယာ၊ အီရတ်၊ ဆီးရီးယား၊ လစ်ဗျား နှင့် ကွန်ဂို-ကင်ရှာဆာ (၆) နိူင်ငံက အပေါ်တွင် ရှိနေသေးသည်၊ အလျော့တော့ မပေးသင့်။
Lowest GDP per head (Living Standard)
GDP per head အနည်းဆုံးနိူင်ငံစာရင်းတွင် ဆိုမာလီသည် ဒေါ်လာ ၁၃၀ ဖြင့် နံပါတ်တစ် နေရာ ချိတ်ထားပြီး မြန်မာမှ ၈၇၆ ဒေါ်လာဖြင့် နံပါတ် (၂၀) ရရှိခဲ့ပြီး နံပါတ် ၁၉ ဖြစ်သော ဟေတီကျွန်းနိူင်ငံနှင့် မတိမ်းမယိမ်းရှိခဲ့သည်။ သို့အတွက် ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မှ စင်္ကာပူကို (၅) နှစ်အတွင်း မှီရမည်ဆိုခြင်းမှ ကျွန်းနိူင်ငံခြင်းတူသော ဟေတီနှင့် သွေးရိုးသားရိုး မှားပြောခြင်း ဖြစ်နိူင်လှပေသည်။
Quality of life ဖြစ်သော Human Development Index (HDI), Gini coefficient, နှင့် Economic Freedom Index တွင်မူ မြန်မာသည် အနည်းဆုံး နိူင်ငံ ၂၄ နိူင်ငံ စာရင်းတွင် မပါဝင်ခဲ့၊ ၂၅ များ ဖြစ်နေလားတော့ မိမိလည်း မသိ။
ယုံခြင်ယုံ မယုံခြင်နေ ရေးရမယ့် တာဝန်ရှိလို့၊ ၂၀၀၂-၁၂ အတွင်း Average annual % increase in real GDP စာရင်းမှာ မြန်မာနိူင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမြင်ဆုံးနိူင်ငံ စာရင်းတွင် ၉.၅% ဖြင့် နံပါတ် (၈) ချိတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ တရုတ်က ၁၀.၄ % ဖြင့် နံပါတ် (၆) ပါ။ စင်္ကာပူတောင် ၆% နဲ့ နံပါတ် (၄၁)ပါ၊ စာရင်းလိမ်ပြချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပါတယ်။ လီကွမ်းယုသာ တွေ့လိုက်လို့ကတော့ သူ့သား နဲ့ ၀န်ကြီးတွေကို အရေးပေါ် အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ဆူလိုက် ကြိမ်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း၊ မြန်မာပြည်က သာသွားပြီ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
ကုန်သွယ်ရေးမှ ရရှိသော ပမာဏသည် GDP ၏ ၁၈.၃% ရှိပါတယ်။ အဲ့သည့် စာရင်းမှာတော့ နံပါတ် (၂၁) ပါ။
၀မ်းသာစရာပါခင်ဗျာ။ ၂၀၁၃ အတွက် အနိမ့်ဆုံး နိူင်ငံ (၂၀) စာရင်းမှာ မပါပါဘူးခင်ဗျာ။
လယ်မြေတွေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဘို့ရန် မရှိသလောက် အသိမ်းခံလိုက်ရလို့လား မသိ၊ နိူင်ငံ (၂၅) နိူင်ငံ စာရင်းမှာ ပါသင့်ရက်နဲ့ မပါဘူးခင်ဗျာ။
ကမ္ဘာ့ ဆန်တင်ပို့တဲ့ ထိပ်တန်း (၁၀)နိူင်ငံ စာရင်းမတော့ မြန်မာဟာ နံပါတ် (၇) ချိတ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂-၁၃ အတွက် ဆန်တင်ပို့ခဲ့မှု ပမာဏဟာ တန်ချိန် ၁၁.ရ သန်း ခန့် ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်း စားသုံးမှု ပမာဏ သည် တန်ချိန် ၁၀.၄ သန်းရှိ ဟု ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နိူင်သူ လူဦးရေ၏ ၇၈.၆%သည် အလုပ်လုပ်ကိုင် လျက် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ အမျိုးသမီးများ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု နှုန်းတွင် မြန်မာသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ စုစုပေါင်း၏ ၄၉.၈% ဖြင့် နံပါတ် (၁၄) ဖြစ်သည်။ လူကြီး ရော လူငယ် အလုပ်လက်မဲ့ အမြင့်ဆုံး နိူင်ငံ ၄၀ စာရင်းတွင် မပါဝင်။
မြန်မာနိူင်ငံသည် ၁.၇ ဖြင့် ကမ္ဘာတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်၊ အမှတ်ပေးမှုမှာ ၁ အား အရည်အချင်းရှိသူများ အခြားနိူင်ငံများသို့ ထွက်ခွာ အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၇ အား ပြည်တွင်းတွင် ပင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်မှု အဖြစ် လျာထားပြီး ၁ မှ ရ ကြားတွင် တွက်ချက်ရာ မြန်မာသည် ၁.၇ ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းရှိသူအားလုံး ပြည်ပထွက်ခွာက ၁ ဘ၀ ကျရောက်ရပေတော့မည်။
Number of Days Taken to Registeranew company
မြန်မာဟာ အကြာဆုံး နိူင်ငံ (၁၆) နိူင်ငံ စာရင်းမှာ ၇၂ ရက်နဲ့ နံပါတ် ၁၃ ရပါတယ်။ သို့သော် လာဒ်ပေးလာဒ်ယူမှု အမြင့်ဆုံး (၁၂) နိူင်ငံ စာရင်းမှာတော့ မပါသေးဘူးခင်ဗျ။
Lowest Car Ownership
အဆိုပါ စာရင်းတွင် မြန်မာ သည် လူတထောင်လျင် (၆) ဦးနှုန်းသာ ကားပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားပြီး နံပါတ် ၁၄ ကို ရရှိသွားပါတယ်။ လူတထောင်မှာများ ၁၀ ယောက်လောက် ပိုင်သွားရင် တောင် မတွေးရဲစရာ ခင်ဗျာ။
လာပြီခင်ဗျာ၊ ကဲ.. ကြည့် ဟောတွေ့ပြီဗျာ၊ lowest စာရင်းရဲ့ ထိပ်ကပ်နေလို့ မနည်းရှာရတယ်၊ မရှိဘူးလားတောင် ထင်မိသေး ထိပ်ဆုံး နံပါတ် (၁) ဗျာ၊ GDP ရဲ့ ၀.၈% နဲ့ပါ၊ ကလေးတွေ လမ်းပေါ်ထွက်ကုန်တာလဲ မပြောနဲ့လေ။
၂၀၁၀-၁၅ အတွင်း လူ တထောင်လျင် ၈.၅ ယောက်ဖြင့် နံပါတ် (၇၉)၊ မွေကင်းစ ကလေး သေဆုံးနှုန်းမှာ လူတထောင်လျင် ၄၈.၉%ဖြင့် နံပါတ် (၄၁) ဆီနီဂေါ နဲ့ တန်ဇန်နီးယား အကြားမှာ ရှိနေပါတယ်။
TB ဖြစ်ပွားနှုန်း အမြင့်ဆုံး နိူင်ငံ စာရင်းမှာတော့ လူ တထောင်လျင် ၃၇၇ ဦး နှုန်းဖြင့် နံပါတ် (၁၅) ချိတ်ပါတယ်။ HIV/AIDS သေဆုံးမှု အမြင့်ဆုံး (၂၅) နူိုင်ငံ စာရင်းမှာတော့ မပါပါဘူး၊
ကျမ်းမာရေး အသုံးစာရိတ်မှာတော့ လွှတ်တော်က GDP ရဲ့ ၅% အနည်းဆုံး ရှိရမယ် ဆိုပေမယ့် မသုံးနိူင်ရှာပါဘူး၊ ထုံးစံအတိုင်း အနည်ဆုံး စာရင်းမှာ ၁.၈% ဖြင့် ပထမဆု ဆွတ်ခူးရရှိသွားပါပြီခင်ဗျာ၊ လူကြီးမင်းများ လက်ခုတ်တီးကြပါ။ Hunger Index မှာတော့ ကံကောင်းတယ်ခင်ဗျ၊ ၂၅ နိူင်ငံ စာရင်းမှာ လာအိုပါပြီး ကျွန်တော်တို့ မပါဘူး၊
အလှုရေစက် လက်နဲ့ မကွာ အကျိုးကြောင့် စာရင်းမှာ ကနေဒါနဲ့အတူ နံပါတ် (၂) ချိတ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ လူဦးရေ၇ဲ့ ၅၈% ဟာ အလှုဒါန ပြုကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် အနည်းဆုံး (၂၈) နိူင်ငံ စာရင်းက လွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ အနည်းဆုံး ဆွတ်ခူးသူကတော့ Eritera နဲ့ ဒုတိယကတော့ မြောက်ကိုရီးယား ပါ။ အရှေ့တောင်အာရှ နိူ်ငံထဲက ဆိုရင် လာအိုတို့ ဗီယက်နမ်တို့ပါပြီး သီရိလင်္ကာတောင် ပါလိုက်သေးဗျ၊ ဒါတော့ ချီးကြူးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Defence Spending (As % of GDP)
ပြည်ပမှ ကျူးကျော်မဲ့ အန္တရာယ်တွေ များလွန်း လို့လားမသိ၊ အမြင့်ဆုံး သုံးစွဲတဲ့ နိူင်ငံ ၂၄ နိူင်ငံ စာရင်းမှာ မြန်မာ GDP ရဲ့ ၄.၂% ဖြင့် နံပါတ် (၁၃) ရရှိသွားပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ကုန်ကြမှာစိုးလို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိူင်တဲ့ ပြည်ပ အန္တရာယ်တွေ ထုတ်မပြောတာ ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။ ကြိတ်ပြီး စစ်အင်အား ဖြည့်တင်းနေရရှာတာပါ၊ အင်မတန် ကျေးဇူးတင်ဘို့ ကောင်းလှပါတယ် ခင်ဗျာ။ လက်နက်ကိုင်အင်အား ကြည့်အုန်းမလား ၄.၀၆ သိန်းဖြင့် အများဆုံး စာရင်းမှာ နံပါတ် ၁၂ ရှိပါတယ်။ လက်နက် တင်ပို့မှု စာရင်းမှာ ဆိုရင်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာ ဒေါ်လာ ၃၆၂ သန်းဘိုး တင်သွင်းခဲ့လို့ အများဆုံးစာရင်းမှာ နံပါတ် (၁၈) ပါ။ တခု ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်ရတာက ငြိမ်းချမ်းမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ နိူင်ငံ ၂၄ နိူင်ငံ စာရင်းမှာ မပါတာပဲ ခင်ဗျာ။
ကဲ..ကျွန်တော် အစောကြီးထဲက ပြောတယ်နော်၊ စိတ် ခိုင် မှ ဖတ်ပါလို့။